သုံးမိနစ်​ လျှပ်​စစ်​ ​ရေ​နွေး အိုး ပျက်​ရင်​ ပစ်​မထားနဲ့ - Myanmar Express
သုံးမိနစ်​ လျှပ်​စစ်​ ​ရေ​နွေး အိုး ပျက်​ရင်​ ပစ်​မထားနဲ့
September 25, 2017 By Myanmar Express in နည်းပညာ No Comments Tags: ​ရေ​နွေး အိုး
သုံးမိနစ်​ လျှပ်​စစ်​ ​ရေ​နွေး အိုး ပျက်​ရင်​ ပစ်​မထားနဲ့ အခုလိုပြင်​သုံးရင်​ အများကြီးသုံးလို့ရတယ်​။
အခုလို ပြုပြင်​ပြီး ကျ​နော်​ကိုယ်​တိုင်​ လက်​​တွေ့ သုံး​နေတာ ၂ နှစ်​နီးပါရှိ​နေပြီး ဖြစ်​တယ်​ ၊မူလ အသစ်​ထက်​ စိတ်​ချစွာ အသုံပြုနိုင်​တဲ့နည်းပါ။
​ရေ​နွေးအိုး အများစု ဟာ power supply.​ခေါ် လျှပ်​စစ်​ ကို ​အောက်​ဖက်​ အ၀ိုင်း​နေရာက ​ကြွေပါတယ်​ ၊ အဲ့ဒီ​နေရာ မှာတပ်​ဆင်​ထားတဲ့ terminal ​ကြေးပြား​လေး​တွေဟာ အလွန်​ပါးပြီး အသုံးပြု တာ ကြာလာရင်​ အပူဒဏ်​​ကြောင့်​ ပျက်​စီး ကာ ငုတ်​ နှစ်​ခုမထိ​ ​တော့ဘဲ လျှပ်​စစ်​ဓာတ်​ မစီးနိုင်​ကာ ​ရေ​နွေး ကျိုမရဖြစ်​တဲ့ဘ၀ကို​ရောက်​ရပါတယ်​။
၁.ယိုးဒယား ကလာတဲ့ ဟင်း​ကြော်​အိုး အနီ​​တွေမှာ သုံးတဲ့ ​အခံ​ဆော့ကက်​ဂေါင်း (​ကြွေခံဖြစ်​ရပါမယ်​) ကို လျှပ်​စစ်​ဆိုင်​​တွေမှာ 500/- နဲ့ ၀ယ်​ပါ။ ပုံ(၁)
၂.​ရေ​နွေးအိုးေ​အာက်​ဖက်​ screw သုံးလုံးဖြုတ်​ပြီး ဖွင့်​ပါ။ အလည်​ အ၀ိုင်းသို့ power supply ​ပေး သည့်​ ၀ါယာစ နှစ်​စ ​တွေ့ရပါမည်​ ။(အပြာနှင့်​ အနီ) ၊၎င်းအစ နှစ်​ခုအား ဘဲနှုတ်​သီး ပလာယာဖြင့်​ အသာဖြုတ်​ပါ။ ပုံ (၂)
၃.၀ယ်​လာသည့်​ ​ဆော့ကက်​အထိုင်​ မှ ​ကြွေသား ပါသည့်​အပိုင်းကို ယူပြီး ​ရေ​နွေးဘူး၏ ​အောက်​​ခြေ တဖက်​ခြမ်း ၀ါယာကြိုး အလှမ်းမှီရာ ​နေရာတွင်​ ​နေရာချပါ။(အခြားဘက်​တွင်​ အချက်​ပြ မီး/pilot lamp)ရှိသည်​။
၄. ​အောက်​​ခြေ အ​ပေါက်​​ဖောက်​ရာတွင်​ ​ဖောက်​စက်​ မရှိပါက ​ဖော်​ပြထားသလို သံချွန်​ ၊စ​ကေဘာ ကို မီးအပူ​ပေးပြီး ​​ရေ​နွေးဘူး​အောက်​ခံ ​ကော်​သားကို အ​ပေါက်​​ဖောက်​ ​ယူပါ။ ပုံ (၃)
၅. ​ဆော့ကက်​အထိုင်​ ​ကြွေ​ခေါင်း တပ်​ဆင်​​ နေရာချရာတွင်​ လျှပ်​စစ်​ ၀င်​မည့်​ငုတ်​ နှစ်​ခု မထိ​အောင်​ စံနစ်​တကျ နတ်​ကြပ်​ ​ပေးပါ။(တဖက်​ဖက်​ကို ရာဘာ ပိုက်​​သေး စွပ်​​ပေးလျှင်​ ပိုပြီးစိတ်​ချရပါသည်​။ပုံ (၄)
အိုးအထိုင်​ အ​ဟောင်း ​မှ ၀ါယာများဖြုတ်​ကာ အထိုင်​ကို ပြန်​ပြီး အသုံပြုနိုင်​ပါသည်​။ ​ဆော့ကက်​အထိုင်​ မှာ ​ကြွေ ဖြစ်​ရပါမည်​ ။​ရေ​နွေး အိုးမှာ ၀ပ်​ watt-900 ခန့်​ဖြစ်​လို့ အထိုင်​​တွေကို့ စံနစ်​တကျ နတ်​ကြပ်​ ရပါမည်​။ မထိတထိ ဖြစ်​ပါက လျှပ်​စစ်​ spark များဖြစ်​ကာ အန္တရာယ်​ ဖြစ်​နိုင်​​ကြောင်းပါခမျာ။
(ယမန်​​နေ့က ကျ​နော်​ ပြုပြင်​​ပေးခဲ့​သော အမျိုးတ​ယောက်​ရဲ့ ​ရေ​နွေးအိုး ပါ) ဗဟုသုတ နှင့်​ ​ငွေကို​ခြွေတာနိုင်​​စေရန်​ ​ရေးသားတင်​ပြသည်​။
လျှပ်​စစ်​ကျွမ်းကျင်​ အဆင့်​ ၂
« အဲဗာတန် တိုက်စစ်မှုး ဝိန်းရွန်းနီး မျက်​လုံးတစ်​လုံးဆုံးရှုံးပြီးဟု ယူဆရ » ဆံပင်ပုံစံပြောင်းပြီး ကဲတော့မယ်ဆိုတဲ့ ဖွေးစိန်